အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်အသင်းဥက္ကchairman္ဌ Mustafa Cengiz ကသူသည်သူမသာရွေးချယ်ထားသည့်အထွေထွေညီလာခံတွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်လာမလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Mustafa Cengiz သည်ကလပ်အသင်းဖောင်ဒေးရှင်းအစည်းအဝေးပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိရွေးကောက်ပွဲများကိုကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့်အမျှ Mustafa Cengiz “ဟုတ်ပါတယ်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေးဖို့သွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပမ်းစားအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်အပြီးမှာသူဟာ Ankara ကိုသွားပြီးအင်ကာရာကဒီကိစ္စကိုဆန်းစစ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့အစည်းအဝေးများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းတရားဝင်အသိပေးခံခဲ့ရသည်ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်တောင်မှမယုံခဲ့ဘူးအချို့ရှိခဲ့သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတာဝန်အပေါ်လျှင်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းကိုမေးခဲ့တယ်။ ဒီအကြောင်းတရားရေးဆိုင်ရာစာဖြင့်ရေးသားတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်း, တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်း။ ဒါကြောင့်သင်သိကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းထောင်ချောက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့နေကြသည်။ ကပြောကြားသည်။
သူသည်အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်တွင်ထပ်မံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်လားဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ငါဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်မလားဆိုတာကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ မေလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဘယ်သူမှငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။ ငါကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမပြော, ဒါကြောင့်အတော်လေးသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ သင်နေမကောင်းလျှင်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေလဲ။ သင်အစေခံရန်သွားလျှင်, သင်ကျန်းမာပါလိမ့်မည်။ ငါ၏အဖြစ်စဉ်ကိုအခုအချိန်မှာကောင်းစွာတိုးတက်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှလုပ်ရပ်ဘယ်အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှငါ့အဘို့, ငါတို့နှလုံးပေးသောအရာတစ်ခုခုသည်။ ပြင်ပကနေကြည့်လိုက်ရင်ဒါကအဓိပ္ပါယ်မဲ့နေပုံရတယ်။ ငါမတိုက်နိုင်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးထဲဝင်လို့မရဘူး၊ စီးပွားရေးအရအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူး။ ငါဟာအစိုးရ ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။ ငါအလုပ်အကိုင်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ငါတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီ။ မင်းငါ့မိသားစုနဲ့ဆရာဝန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကငါ့ကိုအရင်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီးကတည်းကထွက်သွားစေချင်တယ်။
ဒါ့အပြင် Mustafa Cengiz “သူတို့အားလုံးဟာအဖိုးတန်တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးဂယ်လတ်တာရာမှလာကြတာပါ။ ဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာတစ်ဖက်မှလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အရှိန်အဟုန်ရှိကြောင်းပြသသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးရက်စွဲသတ်မှတ်ထားသည်။ စာတိုက်ကိုမထားဖို့ငါတို့ခုခံတွန်းလှန်နေတယ်ထင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ အတူယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Er Square ကိုဖွင့်လှစ်နေပါသည်။ အသုံးပြုထားသောအသုံးအနှုန်းများ။
BETPAS423 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA! SULTANBET577 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA! BETBABA138 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA! BETBOO618 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA! BETBABA100 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA! SULTANBET561 İŞTE KRİTİK SEÇİMİN TARİHİ VE GERÇEKLEŞECEĞİ NOKTA! BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! RESTBET501 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SULTANBET542 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SUPERBAHİS630 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!